Okwu Mmalite nke Companylọ Ọrụ - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Ntinye aka anyi bu inye ndi ahia anyi ogo kachasi
ọrụ na ngwaahịa na ọnụego ọnụ.
Ikuku bụ onye na-eweta ọrụ zuru ụwa ọnụ nke kpo oku ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na ngwaahịa ikuku na ikuku HVAC zuru oke maka ụlọ obibi, azụmaahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Anyị raara onwe anyị nye nyocha na teknụzụ na ngalaba nke ngalaba mgbake ike yana sistemụ njikwa ihe karịrị afọ 19. Anyị nwere ndị ọrụ R&D siri ike nke na-agbakọ ihe karịrị afọ 50 na ahụmịhe na ụlọ ọrụ ahụ, ma nwee ọtụtụ patenti kwa afọ.
Anyị nwere ihe karịrị 50 ahụmahụ technicians ndị ọkachamara na HVAC na cleanroom imewe maka dị iche iche ụlọ ọrụ ngwa. Kwa afọ, anyị na-mezue ihe karịrị 100 oru ngo na mba dị iche iche. Ndị otu anyị nwere ike ịnye ngwọta HVAC zuru oke gụnyere onye na-ahụ maka ọrụ, imewe, ịwepụta akụrụngwa, nrụnye, ọzụzụ, mmezi, yana ọrụ ngo turnkey iji kwado mkpa ndị ahịa dị iche iche.
Anyị na-ezube iji nyefee ụwa ikuku ikuku dị mma na ngwaahịa yana ngwaahịa dị mma, kachasị mma, ọnụ ahịa ọnụ ahịa na nnukwu ọrụ ndị ahịa anyị.
Nye ọrụ ndụmọdụ na ndụmọdụ, nhọrọ ngwaahịa na eserese imewe dịka ọrụ ndị ahụ.
Nye ihe ngwọta kachasị na imewe, ị nweta, njem, ntinye, ọzụzụ na ọrụ ọrụ
GMP Roomlọ Ngwọta Cleanlọ Dị Ọcha
Manufacturing Industries HVAC Ngwọta
Commercial Hlọ HVAC ngwọta
Oge a Farm HVAC Ngwọta
Mmụta Owuwu HVAC Ngwọta
Residential Owuwu HVAC Ngwọta